Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Sergio Aguero Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Akwukwo Nsogbu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; ''Kun'. Anyị Sergio Aguero Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ tupu akụkọ ihe mere eme, Ndụ Ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-mara obere ihe ọmụma banyere ya.
Sergio Aguero Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Sergio Leonel "Kun" Agüero del Castillo Agüero mụrụ na Quilmes, Buenos Aires na 2 June 1988 dị ka nwa nke abụọ n'ime nnukwu ezinụlọ nwere ụmụ asaa.
Nne ya, Adriana bụ nwunye ụlọ, nna ya, Leonel bụkwa onye ọkwọ ụgbọ ala. Ha abụọ dị afọ iri na ụma tupu amụọ nwa ha nwoke bụ Sergio Leonel "Kun" del Castillo Agüero.
Nne Aguero nwere ime site na ime ime nkenke. Mgbe nne Adriana nke dị afọ iri na ụma dị ime ọnwa isii, obere ụlọ ya na onye mmekọ Leonel del Castillo na nwa nwanyị mbụ Jessica nọ na mpaghara Gonzalez Catan nke Buenos Aires dara ogbenye.
A manyere ha ịpụ, na-abanye n'ime mmiri miri emi n'agbanyeghị ọnọdụ afọ ime ya. Ha ji izu abụọ hie ụra n’elu ụlọ akwụkwọ tupu ha alaghachi.
Iju mmiri tupu Sergio Aguero Birth.
Mgbe nne ya na-achọ ịtụrụ nwa Sergio Agüero, ọ hapụrụ ụlọ mposi na tolọ Ọgwụ ama ama na isi obodo Buenos Aires.
N'ụzọ dị mwute, a jụrụ ya n'ụlọ ọgwụ n'ihi na di ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ na-ebute n'ihi nsogbu dị na afọ ime ya.
Agbanyeghị, e nyere ndụmọdụ n'ụlọ ọgwụ ndị ọzọ enwere ike ịnabata ya. Mgbe a jụrụ ya na nnukwu ụlọ ọgwụ, a dụrụ di na nwunye ahụ ọdụ ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ na-akọwaghị na La Matanza, bụ mpaghara mpaghara Buenos Aires (Isi Obodo Argentina).
Lucas Hernandez nwa akụkọ akụkọ na-enweghị ihe ọ bụla
Obi dị m ụtọ na, mgbe niile, agha, a mụrụ nwa Sergio Aguero n'ụlọ ọgwụ a na 2nd nke June, 1988 n'ihe dịka 3: 23 pm na-atụle 9.7 paụnd.
Sergio Aguero Biography - Arụmụka gbasara ọmụmụ:
Ndị isi ụlọ ọgwụ chọpụtara na ndị nne na nna Sergio Aguero (Mr na Mrs Del Castillo) bụ ụmụntakịrị mgbe amụrụ nwa ha nwoke. Ya, na 18, na onye Leo, 19, klas dị ka obere ma alughi di.
N'ihe ndekọ ahụ, a jụrụ nna ya Leonel Del Castillo ikike iwu ịbanye na ndekọ ụlọ ọgwụ. Ọbụna ihe ikpeazụ emere enyere ha enweghị.
Ha enweghị ike ịnye akwụkwọ njirimara obodo ha nke ga-enyere aka. O bu ihe nwute, akwukwo amuma nke mba a ka ebibiri n'ime idei mmiri nke chupuru ha n'ulo ha.
Nke a pụtara na nwa ha nwoke agaghị aza aha nna ha 'Del Castillo'. Ndị nne na nna ahụ ga-achọ enyemaka site n'aka onye ọzọ na Town iji gosipụta nna ahụ.
Mgbe ọ na-edebanye aha, 'Sergio' dị ka aha a nakweere na nke nne ya (Aguero) ejiri mee ihe na ndekọ ndekọ.
Ruo ugbu a, a maara ya site na aha a. N'adịghị ka ụmụnne ya bụ Yesica, Gabriela, Maira, Daiana, Mauritius na Gaston, ọ kpọrọ aha nne ya, Agüero, ọ bụghị 'Del Castillo' (Aha nna ya).
Sergio Aguero Child Story - Childhoodkpọ esemokwu:
N'oge ememe aha Sergio Aguero, nne na nna ya chọkwara ịkọ aha ya dị ka 'Lionel' mana ndị amachibidoro iwu nchịkwa nke ndị obodo Argentine.
Ha mechara biri maka aha etiti 'Leonel' nke ha ka dị nso 'Lionel'. Ọ dị mkpa ikwu na n'oge ahụ, aha ahụ 'Lionel' A nabataghịzi aha ụmụaka nke ógbè ahụ.
Nke a bụ iwu etinyere na Rosario, ebe otu n'ime ndị Aguero dịkọrọ ndụ 'Lionel Messi' mụrụ nne na nna Jorge na Celia Messi.
Lionel Messi, ọ bụ ezie na a mụrụ ya na mbụ (24 June 1987) so na ndị nwere ihu ọma na gọọmentị Rosario kwadoro aha ya.
Sergio Aguero Bio - Akụkọ kpatara aha njirimara 'KUN':
Mgbe Sergio dị afọ 2, ha kwagara Florencio Varela, n'ebe ndịda Greater Buenos Aires. Nke a bụ ebe ezinụlọ Agüero-Castillo ghọrọ ezigbo ndị agbata obi ha - Mr Chetti´s na ezinụlọ. Mr Jorge Chetti, onye isi ezinụlọ, bụ onye nyere Sergio aha aha anyị niile maara taa.
Isi mmalite nke moniker ahụ bụ usoro ihe nkiri Japanese (nke akpọrọ Wanpaku Amukashi Kum Kum) nke Sergio na-ekiri na TV ọha mgbe ọ bụ nwata.
Sergio hụrụ n'anya na-ekiri ihe omimi nke ọgba aghara-nwa nwoke na ezinụlọ ya, bụ ndị biri n'ụkwụ Kum Kum Mountain.
N'oge na-adịghị anya, ọ ga na-atụgharị uche "kum kum" mgbe niile, nke ahụ ga-abụkwa mmụọ nsọ maka aha aha ya, nke bụ ụwa ama ama ugbu a. Ya mere malitere oge nke Kun Agüero.
Sergio Aguero ekwuola otu oge, Enwere m ekele maka ya n'ihi na ọ bụ ihe pụrụ iche. O siri ike ịhụ onye na-agba ọsọ a na-etu aha mgbe ọ na-egosi ihe nkiri! ”
Sergio Aguero Ndị nne na nna:
Sergio Aguero na Nna.
Nna Aguero bụ onye egwuregwu bọọlụ site na ọrụ mana egosighi ọha klọb ọ na-egwuri egwu tupu ezumike nka ya. Ọ bụ ya zụrụ Aguero na-eto eto dị ka a hụrụ na foto a tupu ya amalite dị ka kpakpando football.
Sergio Aguero na mama m.
Mmekọrịta siri ike dịkwa n'etiti ya na mama ya.
Sergio Aguero Ndụ Ndụ:
Nwa Sergio Aguero na nwa nwanyị Diego Maradona, Giannina.
Sergio Agüero lụrụ di na nwunye Diego Maradona, Giannina ruo afọ anọ. Anyị amaghị ihe mere ha ji kewaa na 2013 na mgbe ịgba alụkwaghịm mechara.
Diego Maradona webatara ha na 2008. O yikwara ka ha kụrụ ya ngwa ngwa n'ihi na Sergio Agüero lụrụ Giannina Maradonna n'otu afọ ahụ, a mụrụ nwa ha nwoke Benjamin na 2009.
Agbanyeghị, ire ọkụ na-enwu gbaa n'etiti abụọ ahụ gbapụtara site n'oge 2012 bịara. Na Jenụwarị 2013, mmadụ abụọ ahụ kewara. Sergio bụ 24 n'oge ahụ na Giannina naanị 23.
Ntorobịa ha anaghị eto eto maka alụmdi na nwunye ha. Sergio aghọọla ezigbo onye egwuregwu bọọlụ mara mma ma nwee ike ịme mmemme ya na ndị otu ya Manchester City.
Mana Giannina biri na Madrid, ebe Sergio na-egwuri egwu ruo 2011 maka Atlético. Mgbe ọ kwagara Manchester iji kpọọ ebe ahụ, ọ ga-egosi na Giannina esoghị ya.
Ogologo oge na-aba ụba n'agbata ndị abụọ ahụ yiri ka ọ bụ mmeri nke alụmdi na nwunye ha.
Mgbe nkewa ahụ ghọrọ onye isi gọọmentị Giannina laghachi na Buenos Aires kpamkpam. O yiri ka nke ahụ ọ kụrụ Sergio ihe karịa ihe ọ bụla n'ihi na ọ nwechaghị ike ịhụ nwa ya nwoke Benjamin, bụ onye ọ na-asọpụrụ nke ọma.
A nụchaala na nkewa ahụ gbanwere mgbe Giannina hapụrụ Buenos Aires na Diego Maradonna na-ekwusi ike banyere ịkwado nkwado maka nwa ya nwanyị nke ọdụdụ na nlelị maka Sergio.
Iwere n'akụkụ nwa ya nwanyị nwere ike ịbụ ihe ijuanya. Na njedebe, o kwesịghị isi ike na Sergio kwa; ka emechara, ọ bụ Diego kpọbatara ha abụọ.
Sergio Aguero na Nwa (Benjamin).
Nwatakịrị nwoke, Benjamin Aguero amalitela igosipụta talent football ya site na arụmọrụ kachasị mma n'ọhịa egwuregwu.
O meriri ịgba chaa chaa nke nna ya. N'ime afọ ise, Benjamin amalitelarị ime ụmụaka ndị ọzọ ihere maka ịgba bọọlụ erughị eru ha.
Sergio Aguero na Karina Tejeda (Ex Girl Friend).
Sergio anaghị adị ogologo oge tupu ya agaa, n'agbanyeghị na obi mgbawa na-efu nwa ya nwoke. N'oge na-adịghị anya, a hụrụ ya na cumbia onye na-abụ abụ Karina Tejeda ma kọọrọ na ha nọkọ ọnụ ruo n'oge na-adịbeghị anya.
Ya na enyi ya nwanyị na-eyi ọmarịcha mma ọnụ. A na-ahụkarị ha ma chọpụta ha n’ebe ọha na eze na-anọ. There nweghị asịrị banyere alụmdi na nwunye ha.
Aguhụnanya Sergio Aguero, Toni Duggan.
Ma ka ọ dị ugbu a, a gwara ya na ya kewapụrụ onwe ya na ya na ọbụna Toni Duggan, onye na-egwuri egwu maka òtù egwuregwu Manchester City FC. A hụwo ha ọnụ na ikike ndị isi.
Sergio Aguero na Toni Duggan.
Akụkọ sitere na Argentina pụta na-ekwu na Duggan nọ na mmekọrịta ya na Aguero Aguero, mana Duggan akpọrọ Twitter iji gọnahụ nkwupụta ahụ, na-akọwa ha dị ka "ihe ọchị".
Ọbụna mgbe a na-agọnahụ ya, otu ihe ngosi TV na obodo Aguero nke Argentina ka na-ejikwa omume nke ịkọ asịrị nke mmekọrịta ha.
Sergio Aguero Biography Eziokwu - Esemokwu na Marcos Rojo:
Sergio Aguero Feud na Marcos Rojo.
Esemokwu dị ilu n'etiti Sergio Aguero na Marcos Rojo dara ozugbo na echi nke Manchester derby. Chi kpakpando Argentina na-eche ihu na Etihad na obughi nani ihe ato n'adoro ma obu ihe ochie iji dozie.
Umu abuo ahu wee buru ndi mmadu n'anwu mgbe ha na-agba iko World mgbe Rojo kpotara di di ya nke Aguero, Karina Tejeda, n'ime ulo ndi ozo nke Argentina iji mee ka mmeri merie Naijiria.
Rịba ama: Aguero malitere ịlụ Karina mgbe alụmdi na nwunye ya bụ Diego Maradona nwa nwanyị, Giannina, dara afọ abụọ gara aga.
Sergio Aguero Biography Eziokwu - Otú E Si Malite Football:
Na 1991, mgbe Sergio dị afọ atọ, ezinụlọ ya kwagara n'otu obere ụlọ dị obere na mpụga Los Eucaliptus, obodo na-adịghị mma nke dịdebere ógbè Quilmes na Bernal.
Mpaghara ahụ nwere nchịkọta nke ụlọ ndị dara ogbenye - obere obere ma e jiri ya tụnyere obodo ndị ọzọ yiri ya nke Greater Buenos Aires. O nwere ọtụtụ nza atọ nwere ohere nke edepụtara dị ka ogige egwuregwu obodo.
Ndị bi, ma nwata ma okenye, gbakọtara na nza ndị a igwu egwu ogologo oge. Ọ bụ na mpaghara ndị a ka Sergio malitere igosipụta akara nke talent ya na bọọlụ - ka afọ na-aga, ha ga-egosipụta nke ọma.
N'okpuru anya Leonels na anya Adriana maka nkwụghachi ụgwọ na ntaramahụhụ, Sergio sonyeere ndị otu ntorobịa mbụ ya na klọb egwuregwu dị iche iche nke ndịda Buenos Aires. Ọ gbasoro otu ụzọ ahụ nna ya jere mgbe ọ dị obere, na Tucuman.
Ọ rụrụ ọfụma na njem njegharị ise n'otu akụkụ yana bọọlụ a na-akpọ "ubi unyi", na-edebanye aha n'usoro nke obere klọb - Loma Alegre, 1 de Mayo, 20 de Junio, Pellerano Rojo, Bristol na Los Primos.
Ọ bụ akụkụ nke nnukwu talent nke nnukwu obodo Buenos Aires na-aghọ ngwụsị izu ọ bụla, yana ọtụtụ puku ụmụaka na-achọ inweta mmeri asọmpi kwa afọ.
Kun maara ịme onwe ya aha dị ka onye nwere ọgụgụ isi na onye nwere mkpebi siri ike n'asọmpi ndị a. Omume ya mere ka ndị na-egwu egwuregwu hụrụ anya n'ọdịnihu.
Na 2005, otu afọ na ọkara ka e mesịrị, Sergio abụrụla onye isi na Independiente´s squad. Omume ya pụtara ìhè mere ka ọ nọrọ ebe otu ndị U-20 nke mba Argentina, n'agbanyeghị afọ 3 dị n'okpuru okpu.
Sergio Aguero, ya na ndị nne na nna na-eme ememe.
Sergio mechara merie U-20 World Cup nke Netherlands kwadoro. Nke a ka ya na ezinụlọ ya mere.
Ekpebiri bọọlụ ikpeazụ na Naịjirịa site na ntaramahụhụ enyere Sergio na nke Lionel Messi gbatara ya.
Kun raara onye mmeri ya enyi ya bụ Emiliano Molina mmeri ahụ, onye ya na ya gụrụ egwu n'oge niile ọ nọ na Independiente´s usoro ntorobịa ma nwụọ n'ụzọ dị egwu n'ihe mberede ụgbọ ala n'oge iko ụwa.
N'oge na-adịghị anya mgbe ọ laghachiri Argentina, ọ họọrọ inyefe ndị enyi ya nnukwu mmeri n'ọgba ebe a megide Racing de Avellaneda, ebe Kun gwuru ihe mgbaru ọsọ nke ga-anọgide na akụkọ ntụrụndụ nke ndị Argentine football.
Kun, dị naanị afọ iri na asaa ma ọ bụrịrị arụsị nke ìgwè mmadụ ahụ, kwesịrị ịhapụ ndị ọ hụrụ n'anya na 17 mgbe e zigara ya na Atlético Madrid maka nde euro 2006 - Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Sergio Aguero :gbọ ala:
Sergio Aguero's Lamborgini.
Aguero na-eji ụgbọ ala Huracan - nke Lamborgini rụpụtara. Echere na ọ ruru $ 160,000.00 (Otu narị puku na iri isii).
Anya zuru oke nke Sergio Aguero's Lamborgini.
Nsogbu Nico Rosberg iji merie Nsogbu PUMA:
Sergio Aguero Challenging Nico Rosberg iji merie nsogbu PUMA.
E wetara ndị ọgba bọọlụ Argentina na Manchester City na Donington Park Racing Circuit na UK ebe e nyere ya nkuzi site n'aka Nico Rosberg, tupu etinye onyinye ya n'ule ahụ na-agba ọsọ Mercedes C 63 AMG.
Ọ na-agbagharị n'okporo ụzọ ahụ, na-etinye ụfọdụ oge ụkwụ dị egwu, na-egosi na ụkwụ ya na-arụ ọrụ nke ọma na pedal dịka ha na-eme na bọọlụ bọọlụ.
Otú ọ dị, n'achọghị ka ọ gafee, onye ọkwọ ụgbọala German Formula 1 wee nye Aguero njem ndụ ya n'ụgbọ ala Mercedes DTM.
Sergio Aguero Tatoo Eziokwu:
Agüero nwere egbu egbu n'ime aka aka nri ya Tengwar- ụdị edemede e dere site JRR Tolkien in Jehova nke Mgbaaka-nke na-achota ya Kun Agüero na mkpụrụedemede Latin.
O nwekwara egbu egbu na aka ekpe ya nke aha nwa ya na ụbọchị ọmụmụ ya. (Hụ okpuru).
Sergio Aguero Bio - Nwa akwụkwọ kwụsịtụrụ maka ịkpụ ntutu ya:
Akwụsịre nwa akwukwo n'elu Sergio Aguero Haircut.
A machibidoro onye nọ n'afọ iri na ụma ụlọ akwụkwọ site na ụlọ akwụkwọ ya n'ihi na ọ nwere ntutu isi nke ndị dike ya na-agba bọl kpaliri. E nyere ya iwu ka ọ nọrọ n'ụlọ ruo mgbe ọ lara, ezinụlọ ya kwuru.
A gwara Tom Mosesley dị afọ iri na azụ ya na azụ ya, dị ka ihe ngosi Manchester City, dị oke egwu. E wepụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ na ụbọchị ọmụmụ ya.